Muvhuro 1 Kurume 2021
Bhasikoro Remagetsi Iyo OZOa bike yemagetsi inoisa furemu ine rakasiyana 'Z' chimiro. Chimiro chinoumba mutsara usina kubhuroka unobatanidza zvakakosha zvinoshanda zvinhu zvemotokari, zvakaita semavhiri, kufambisa, zvigaro uye mafumbo. Iyo 'Z' chimiro yakatungamirwa nenzira yekuti chimiro chayo chinopa yakasarudzika-yakavakirwa kumashure yokumiswa. Hupfumi hwehuremu hunopihwa nekushandiswa kwemafaira ealuminium muzvikamu zvese. A rinogona kubviswa, rechargeable lithium ion bhatiri rakabatanidzwa muchimiro.
Svondo 28 Kukadzi 2021
Nzvimbo Yeruzhinji Giredhi II yakarongedzwa arcade yakashandurwa kuve inokoka kuvapo kwemugwagwa kuburikidza nekurongedza iwo mwenje chaiwo panzvimbo yakakodzera. Kazhinji, kuvhenekerwa kunojekeswa kunoshandiswa zvakazara uye mhedzisiro dzayo dzakarongedzwa zvakasimudzirwa kuzviwanira musiyano mukujeka patterning iyo inogadzira kufarira uye kukurudzira kushandiswa kwakawandisa kwenzvimbo. Strategic kusanganisa dhizaini uye dhizaini yesimba inosimbisa pendent yakagadziriswa pamwe chete neayo muimbi kuitira kuti zvinoonekwa zvioneke zvakatanhamara pane kuwandisa. Nekupera kwemasikati, chimiro chakashongedzwa chakawedzerwa nehurikidzwa hwemheni yemagetsi.
Mugovera 27 Kukadzi 2021
Tafura Inokwaniriswa Iyo Lido inopeta mune diki rectangular bhokisi. Kana yapetwa, inoshanda sebhokisi rekuchengetera zvinhu zvidiki. Kana ivo vachisimudza mahwendefa epadivi, makumbo akabatana vanobva kunze kwebhokisi uye Lido anochinja kuva tafura yetii kana tafura diki. Saizvozvo, kana ivo vakafukura zvizere mahwendefa emativi pamativi ese maviri, inoshandura kuva tafura hombe, ine ndiro yekumusoro ine upamhi hwe 75 Cm. Iri tafura rinogona kushandiswa se tafura yekudyira, kunyanya muKorea neJapan apo kugara pasi uchidyira itsika yakajairika.
Chishanu 26 Kukadzi 2021
Chiridzwa Kubatanidza zviridzwa zviviri pamwechete izvo zvinoreva kuti kubereka kuberekwa kune mutsva mutsva, basa idzva mukushandiswa kwezviridzwa, nzira itsva yekutamba chiridzwa, chitarisiko chitsva. Zvakare cherekedza zviyero zvemadhiramu zvakaita seD3, A3, Bb3, C4, D4, E4, F4, A4 uye tambo yekucherekedza zviyero zvakagadzirwa muEADGBE system. Iyo DrumString yakareruka uye ine tambo yakasungirirwa pamusoro pemapfudzi uye chiuno saka kushandisa uye kubata chimbo kwacho kuchareruka uye kunokupa iwe kugona kushandisa maoko maviri.
China 25 Kukadzi 2021
Ngowani Yebhasiketi Iyo ngowani inokurudzirwa ne 3D Voronoi chimiro icho chakapararira kwazvo muMhando. Nekubatanidzwa kweiyo parametric maitiro uye bionics, ngowani yemabhasiketi ine inovandudza ekunze meishini system. Iyo & # 039; s dzakasiyana neyakajairwa echinyakare flake yekudzivirira chimiro mune yayo isina kufiniswa bionic 3D mehendi system. Kana ikabatwa neuto rekunze, ichi chimiro chinoratidza kugadzikana kuri nani. Pane chiyero chekureruka uye chengetedzo, ngowani inovavarira kupa vanhu kugadzikana zvakanyanya, kwakanyanya fashoni, uye kuchengetedza
Chitatu 24 Kukadzi 2021
Tafura Yekofi Iyo tafura inogadzirwa nezvimedu zvakasiyana zveplywood zvakachinjaniswa pamwechete pakamanikidzwa. Nzvimbo dzakasarudzika uye dzakabiwa nemate uye yakasimba kwazvo varnish. Iko kune maviri mazinga -sekuti mukati me tafura iri hollow- iyo inoshanda kwazvo pakuisa magazini kana mapani. Pasi petafura pane anovakwa mune em bullet mavhiri. Saka kusiyana pakati pefurafura netafura kushoma, asi panguva imwechete, zviri nyore kufamba. Iyo nzira iyo plywood inoshandiswa (vertiki) inoita kuti ive yakasimba.
Conspiracy - Sandal shaped jewels- Shangu Dzakasarudzika Svondo 7 Kurume
HandiShred Pepa Shredder Mugovera 6 Kurume
Gamsei Jongwe Barha Chishanu 5 Kurume
Dhizaina bvunzurudzo yezuva Svondo 7 Kurume
Dhizaina ngano yezuva Mugovera 6 Kurume
Dhizaini yezuva Chishanu 5 Kurume
Mugadziri wezuva China 4 Kurume
Dhizaini timu yezuva Chitatu 3 Kurume
Bhasikoro Remagetsi Nzvimbo Yeruzhinji Tafura Inokwaniriswa Chiridzwa Ngowani Yebhasiketi Tafura Yekofi